လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး – ကျောက်ဖြူ | Ko Rohingya
ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်မ်များအား ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်မီးရှို့ခံခဲ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်မှန်များ
This entry was posted on February 7, 2013, in ကမာန်, ရိုဟင်ဂျာ, သမိုင်း, အစ္စလာမ် and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, တိ/ကု အေးမောင်, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ရခိုင်, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရခိုင်အကြမ်းဖက်ပါတီ, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, သမိုင်း, သမ္မတ, ဦးခင်ရီ, ဦးသိန်းစိန်, ဒေါက်တာအေးမောင်, မြန်မာ, RNDP ပါတီ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ စတေးခံလိုက်ရတဲ့ ရခိုင်သူလေး မသီတာထွေး	ဘွရှင် (ခ) မြတ်သိန်းထွန်းအား ချေမှုန်းခြင်း (၃) →